China Health Mgbakwunye Vitamin D3 Powder / Oil Manufacturer na Supplier | Ruizheng
Mgbakwunye Ahụike Vitamin D3 ntụ ntụ / Mmanụ
Product aha: Vitamin D3
Ụdị: Nutrition Mgbakwunye
CAS Mba.: 67-97-0
Aha ngwaahịa: Vitamin D3
:dị: Mgbakwunye Nutrition
Ọdịdị: Ntụ ntụ / Mkpụrụ
(1) Vitamin D3 bụ nke a na-ejikarị eme ihe dị ka ntinye ọgwụ, nri ndị na-edozi ahụ, Nutraceutical, Ngwaahịa Nri, Ihe Nri.
(2) Vitamin D3 bụ abụba-soluble. Nke a pụtara na a na-echekwa ya gabigara n’ime anụ ahụ. Enwere ike itinye ọgwụ dị elu ogologo oge na anụ ahụ dị nro, na-emebi emebi akụrụ na usoro obi. Dị ka vitamin ndị ọzọ nwere ike ịbụ nsi. Mgbaàmà nke oke vitamin D3 gụnyere ọgbụgbọ, adịghị ike, afọ ntachi, obi mgbawa oge niile, ụkọ ọnwụ, ụkọ, na mgbakasị.
(3) Vitamin D3 bụ otu n’ime vitamin ndị ahụ erughị eru nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu. Childrenmụaka anaghị enweta vitamin ndị ọzọ na nri ha nọ n'ihe egwu dị ukwuu nke ịrịa ọrịa rickets, ọrịa na-ebute nrụrụ nke ọkpụkpụ na ezé na ụmụaka. Ndị okenye nwere obere vitamin ndị ọzọ nwere ike ibute osteomalacia (nke yiri rickets) ma na-arịa osteoporosis, ọrịa na-eme ka ọkpụkpụ na-ada mbà.
(4) Vitamin D3 na-achịkwakwa usoro ụjọ ahụ, na-enyere aka n'ịgwọ ehighị ụra nke ọma. Otu iko mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ tupu ị lakpuo ụra pụrụ inyere gị aka ihi ụra nke ọma! Vitamin D3 na mmepe nke ọrịa ndị ọzọ, gụnyere ụdị nke mbụ m, ọrịa akwara na ọkpụkpụ, yana kansa.
Previous: Maltose Na-ere Ọhụrụ Na-ere 69-79-4
Next: Ngwunye Factory Retinol Vitamin A Acetate
zụta Vitamin D3 na ogaranya
elu mma Vitamin D3
Vitamin D3 nri nri
Vitamin D3 emeputa
Ọnụ ego Vitamin D3
Vitamin D3 soplaya
Vitamin D3 N'ogbe na china
Ihe oriri Tricalcium Phosphate TCP
Ngwunye Factory Retinol Vitamin A Acetate